WayCoin စျေး - အွန်လိုင်း WAY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို WayCoin (WAY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ WayCoin (WAY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ WayCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ WayCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
WayCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
WayCoinWAY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000834WayCoinWAY သို့ ယူရိုEUR€0.000706WayCoinWAY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000639WayCoinWAY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000759WayCoinWAY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00741WayCoinWAY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00526WayCoinWAY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0185WayCoinWAY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00311WayCoinWAY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0011WayCoinWAY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00117WayCoinWAY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0185WayCoinWAY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00647WayCoinWAY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00448WayCoinWAY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0624WayCoinWAY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.141WayCoinWAY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00115WayCoinWAY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00128WayCoinWAY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0259WayCoinWAY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0058WayCoinWAY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0892WayCoinWAY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.989WayCoinWAY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.323WayCoinWAY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0609WayCoinWAY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0229
WayCoinWAY သို့ BitcoinBTC0.00000007 WayCoinWAY သို့ EthereumETH0.000002 WayCoinWAY သို့ LitecoinLTC0.00002 WayCoinWAY သို့ DigitalCashDASH0.000009 WayCoinWAY သို့ MoneroXMR0.000009 WayCoinWAY သို့ NxtNXT0.0651 WayCoinWAY သို့ Ethereum ClassicETC0.000123 WayCoinWAY သို့ DogecoinDOGE0.241 WayCoinWAY သို့ ZCashZEC0.00001 WayCoinWAY သို့ BitsharesBTS0.0257 WayCoinWAY သို့ DigiByteDGB0.0267 WayCoinWAY သို့ RippleXRP0.00296 WayCoinWAY သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 WayCoinWAY သို့ PeerCoinPPC0.00277 WayCoinWAY သို့ CraigsCoinCRAIG0.38 WayCoinWAY သို့ BitstakeXBS0.0356 WayCoinWAY သို့ PayCoinXPY0.0146 WayCoinWAY သို့ ProsperCoinPRC0.105 WayCoinWAY သို့ YbCoinYBC0.0000004 WayCoinWAY သို့ DarkKushDANK0.268 WayCoinWAY သို့ GiveCoinGIVE1.81 WayCoinWAY သို့ KoboCoinKOBO0.19 WayCoinWAY သို့ DarkTokenDT0.000768 WayCoinWAY သို့ CETUS CoinCETI2.41
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 05:55:02 +0000.